Nialoha ny fanambarana moa dia nisy ny kabary nataon’ny filohan’ity vaomiera ity, Hery Rakotomanana, ho fanazavana ny sain’ny rehetra. Nohamafisiny fa nisafidy ny hifototra amina zavatra miisa 3 ny CENI nandritry ny fikarakarana iny fihodinana voalohany ho filoham-pirenena iny dia ny fangaraharana, ny tsy fitanilana ary ny fahaleovantena. Ny mangarahara no tena nimasoanay, hoy izy. Ohatra nomeny nentina nanaporofoana izany ny nanehoana ampahibemaso ny fafana fikirakiran’ity vaomiera ity ireo vokatra rehefa nampiahiahy ny maro. Teo ihany koa ny fanehoana ampahibemaso ny fampitahana ny lisitra sy ny vokatra. Tapaka sy namana, raiamandreny avokoa ireo kandida ary tsy nandalo tao an-tsainay 9 mianadahy mihitsy ny hitanila amin’iza na amin’iza. Nohamafisin’ny CENI fa tsy nandray baiko ivelan’ny lalàmpanorenana sy ny lalàna manan-kery izy ireo.